‘जूनको रोटी’ मा देशनिर्माणको चिन्ता – Chitwan Post
‘जूनको रोटी’ मा देशनिर्माणको चिन्ता
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेष्ठ ३०, २०७२
मैले चितवनका खनाल रेवतीरमणका कविताहरु सुन्न थालेको दुई–तीन वर्ष भयो । उनको कविता भन्ने शैली निकै रोचक छ । हाउभाउ प्रदर्शन नगरी, चर्को–चर्को स्वरमा खबरदारी गर्नुपर्नेलाई खबरदारी नगरी, व्यङ्ग्यबाण बर्साउनु पर्नेलाई व्यङ्ग्यबाण नबर्साइकन र नतर्साइकन अनि पाठकलाई पेट मिचीमिची नहँसाइकन उनले कविता वाचन गर्नै सक्तैनन् । त्यसैले, उनका कविता पढ्दाभन्दा पनि उनकै मुखबाट सुन्दा निकै आनन्द आउँछ । चितवनमा सञ्चालन हुने प्रायःजसो साहित्यिक कार्यक्रमहरुमा मैले यसरी उनका कविता सुन्दै आएको थिएँ, तर उनको थप परिचय भने मैले पाउन सकेको थिइनँ । २०७१ फागुन ९ गते उनले एकै दिन ‘अर्जुन–बाण’ मुक्तकसङ्ग्रह र ‘जूनको रोटी’ कवितासङ्ग्रह सार्वजनिक गरे । त्यसैदिन बिदा हुने बेलामा ‘वरिष्ठ समालोचक तथा निबन्धकार’ भन्ने उल्लेख गरेर मेरा हातमा उनले ती दुवै कृतिहरु थमाइदिए । मैले कहिलेकाहीँ निबन्धजस्ता लेखहरु त लेख्ने गरेको थिएँ, तर समालोचनात्मक लेखहरु खासै लेखेको थिइनँ । साहित्यिक कार्यक्रमहरुमा कहिलेकाहीँ कृतिका बारेमा भाषिक टिप्पणीहरु गरेकै भरमा मलाई उनले ‘वरिष्ठ समालोचक’ भनेर दिएको आत्मीय सम्मान मेरा लागि अग्राह्य र अपाच्य थियो । छिटो र ढिलो गरी उनका दुवै कृतिहरु पढ्दा मैले उनको वैयक्तिक र साहित्यिक थप परिचय पाएँ । उनका कृतिहरुभित्र विचरण गर्दा आपूmले पाएको पाठकीय दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेर यतिखेर मैले उनले मलाई दिएको तथाकथित ‘वरिष्ठ समालोचक’ को सम्मानको गुन र निःशुल्क प्रदत्त पुस्तकको मूल्यसमेत तिर्ने प्रयत्न गर्दैछु ।
रेवतीरमण खनाल (२०१३) गोरखाको मिर्कोट सानाबेँसीमा जन्मेछन् र चितवन बसाइ सरेर भृकुटी कागज कारखानामा निकै वर्ष सेवा पनि गरेछन् । उनले ‘ल्याऊँ साम्यवाद’ (काव्य २०४७), ‘कथोपकथन’ (कविता–गीतसङ्ग्रह २०५९), ‘मान्छेभित्र मान्छेको खोजी’ (हाइकुसङ्ग्रह २०६१) र ‘गजलपथका गजलहरु’ (सहलेखन, गजलसङ्ग्रह २०६१) नामक कृतिहरु यसअघि नै प्रकाशमा ल्याएका रहेछन् । पल्लव साहित्य प्रतिष्ठान चितवनबाट ‘सर्वोत्कृष्ट कविता सम्मान’ (२०६१) लगायत विभिन्न साहित्यिक संघसंस्थाहरुबाट उनी सम्मानित एवं पुरस्कृत पनि भएका रहेछन् । चितवनका साहित्य सङ्गम, प्रगतिशील लेखक सङ्घ आदि साहित्यिक संस्थाहरुमा पनि उनको सक्रिय संलग्नता रहँदै आएको रहेछ । रमण ‘एप्याथी’ उपनामले समेत चिनिने खनाल रेवतीरमणको ‘जूनको रोटी’ कृति सार्वजनिक भएको केही दिनमैं चितवनबाट पुरस्कृत पनि भएको थियो ।
‘जूनको रोटी’ कवितासङ्ग्रहमा ६१ ओटा कविताहरु सङ्गृहीत छन् । ‘मनको लड्डु र जूनको रोटी’ शीर्षकको पाँचौँ कविताका आधारमा यस सङ्ग्रहको नामकरण गरिएको छ । आकाश जोतेर अन्न फलाउनु, मनको सुलीमा अन्न भित्र्याउनु, जूनको रोटी तावामा पकाउनु र खान लाग्दा थुक निलिनु तर रोटी ननिलिनुले मनको लड्डु र जूनको रोटीको स्वाद एउटै रहेको अनुभूति गरेर यस कवितासङ्ग्रहको नाम ‘जूनको रोटी’ राख्न रूचाइएको हो । विशेषतः राजनीतिक र सामाजिक विकृति र विसङ्गतिहरुले निम्त्याएका अनन्त भोकहरुको मनको लड्डुझैँ जुनको रोटी खाएर तृप्ति गर्नुपर्ने वर्तमानको बाध्यात्मक परिवेशलाई चित्रण गर्न ‘जूनको रोटी’ कवितासङ्ग्रहका अधिकांश कविताहरु सक्षम देखिन्छन् ।
यस कवितासङ्ग्रहका सबैभन्दा बढ्ता कविताहरु नेपालको राजनीतिक विकृति र विसङ्गतिको चिरफार गर्नमा केन्द्रित छन् । देशको विकास होइन नोट कमाउन ललिपप, ह्विस्की र ब्रान्डीका आधारमा जनताको भोट तान्ने नेताहरुको दुष्प्रवृत्तिले गर्दा नेपाल उँभो लाग्न सकेको छैन । निशाचरहरुले दुनियाँलाई बर्बाद गरिरहे पनि एक न एक दिन अँध्यारो रातको होइन, उज्यालो दिनको जित अवश्यम्भावी छ भन्ने कुरामा कवि आशावादी देखिन्छन् । बासी र थाङ्ने विचारहरु लिएर लाखे नाच नचाउनेहरुले गर्दा देशले वास्तविक रुपमा परिवर्तनको अनुभूति नै गर्न सकेको छैन । छिद्रान्वेषी नरहरुले भन्दा तीक्ष्ण दृष्टि राख्ने र कुनै छलछाम नजान्ने वानरहरुले देश चलाइदिएको भए बरू देशले प्रगतिको पाइला चुम्नसक्ने सम्भावना थियो । आफ्नो हठी र जिद्दी स्वभाव छाडेर माइलाबाले आफूलाई सामान्य नागरिक ठाने तर हाम्रा कान्छाबाहरुले माइलाबा बन्ने धृष्टता गरिदिनाले जनता र देशको शिर कहिल्यै उँचो हुन सकेन । असार मासको बेफूर्सदी हुनुपर्ने बेलामा पनि हाम्रा नायकहरु कुहिराको कागझैँ गन्तव्यहीन भएर खलनायकको अभिनय गर्दै रूम्जाटारको यात्रामा संलग्न भएका छन् । ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियले त आफ्नो विस्तारित बैठक बसेर सहअस्तित्वको घोषणापत्र जारी गरी शरीरको सत्ता सञ्चालन गर्न सक्छन् भने मानवीय राज्यसत्ता त्यसभन्दा अझै सहज रुपमा किन सञ्चालन हुन सक्तैन ? भनेर कविले नेपाल सरकारसँग त्यसको जवाफ मागिरहेका छन् ।
‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भन्ने उखान अब हाँडीगाउँमा मात्र सीमित छैन, किनकि यतिबेला सानो हाँडीगाउँ पैmलिएर देश भएको छ भने विशाल देश खुम्चिएर हाँडीगाउँमा परिणत हुन बाध्य भएको छ । जतिसुकै चर्को स्वरले टरटर गरे पनि भ्यागुताहरुले कुवाभन्दा भिन्न संसार हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेर देखाउनै सकेका छैनन् । त्यसैले, देशको आयतन यतिबेला साँघुरिएर कुवाजस्तै भएको छ । दलदलबीचको लडाइँले गर्दा देशको राजनीति कुरुप भएको छ । थारो गणतन्त्र पाल्दापाल्दा हैरानी भएर गणतन्त्रको बेगुती खान चाहने नेपालीको सपना यतिबेला चकनाचुर भएको छ । सुनका कुरा गर्ने नेताहरुले जनताको वास्तविक नुनको मागलाई पनि पूर्ति गर्न नसकेको हुँदा जनता सधैँ भालुपुराणको सप्ताह सुनिरहन विवश छन् ।
जङ्गल चरेर आएका छुच्चा प्रवृत्तिका भैँसीहरु र गाउँ चरेर आएका लुच्चा प्रवृत्तिका जोगीहरुको चर्तिकलाले गर्दा देश यतिबेला विकृति र विसङ्गतिको खलो बन्दै गएको छ । सीमाङ्कन र नक्साङ्कनको विषयमा छोराहरु लडिरहेकाले नेपाल आमाको नयाँ घर बनाउने सपना छेपाराको उखानमा परिणत हुन थालेको छ । भाषणमा सहमति र व्यवहारमा विमति प्रकट भइरहने छेपारे नीतिले गर्दा देशलाई यतिखेर लेन्डुपको भूतले ऐँठन बनाउँदै लगेको छ । काग, चमेरा र बाजहरुको दुष्प्रवृत्तिले गर्दा परिश्रमी र लगनशील मौरीहरुले आफैँले सँगालेको मह चाख्न नपाएझैँ देश पनि मौरीकै नियति भोगिरहन विवश छ । सन्काहा र हेपाहा साँढेहरुको प्रवृत्तिले गर्दा जनसाधारणहरु तर्सिरहेका छन् । त्यसैले, अगस्तिहरुले रूचाएको हाम विधान होइन, जनता जनार्दनले रूचाएको संविधान सँगै लिएर आउन कविले शान्तिलाई आह्वान् गरेका छन् ।
शान्तिदीप अझै नबलेको, संस्कारबाट सामन्तवाद अझसम्म अन्त्य नभएको, क्षेत्रीयता हावी हुँदा राष्ट्रियता गौण बन्दै गएको र गणतन्त्र रणतन्त्रमा परिणत भएकाले ठूले दाइले जङ्गे कीलो उखेल्ने हो कि भन्ने डर बढ्दै गएको छ । हली र बाउसेबीचको द्वन्द्वले गर्दा उर्वर खेत बाँझै रहेको छ । जताततै हाम्रा मान्छे भन्दाभन्दै राम्रा मान्छेहरु विदेशिन वा देशभित्रै पाखा लाग्न विवश भएका छन् । मानव प्रधानमन्त्रीमा संवेदना हराउँदै गएकाले ठोकिएमा पनि आगो बल्न सक्ने संवेदना भएको ढुङ्गालाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सुम्पिन पाए बरू देश विकासतिर लम्किने थियो कि भन्ने व्यङ्ग्यबाण प्रहार गर्न पनि कवि सफल देखिन्छन् ।
देशमा न हलोले बाँझो फुटाउन सक्यो, न रुखले छहारी नै दिन सक्यो, न सूर्यले जनताका मनको बिस्कुन सुकाउन सक्यो, न त हँसिया र हथौडाले श्रमिकहरुको हातमुख जोर्न नै सक्यो । त्यसैले, यतिबेला विकल्पमा देश निर्माण गर्नका लागि नयाँ औजार र कारिगरको आवश्यकता देखिएको छ । देशमा उज्यालो चोरेर ल्याउने एउटा प्रमिथस जन्माउनु आवश्यक छ । देशलाई काग, चमेरा र उल्लुको होइन भँगेरा, जलेवा र परेवाको आवश्यकता छ । तर, अमेरिकाको राष्ट्रिय पक्षी बाजले तिनको खेदो गर्न भने छाडेको छैन । संविधान ल्याउने बहानामा नेपालको अस्तित्व नमेटियोस् भनेर कविले खबरदारी गरिरहेका छन् । देशको कुना–कन्दराबाट अस्मिता हराए पनि त्यो जिउँदै रहेकाले एक न एक दिन भेटिएर हाम्रो अनुहारमा त्यसले खुसीको बहार ल्याउने छे भन्ने कुरामा कवि आशावादी देखिन्छन् ।
कवि अक्षरहरुको आराधना गरेर अटल र अकण्टक शासन व्यवस्था स्थापना गर्न चाहन्छन् । उनले असफल नेतालाई कुर्सी छाड्न आदेश दिँदै कवि नै जनताको मियो बनेर सुशासन कायम गर्न सक्षम हुन सक्ने उद्घोष गरेका छन् । आदिकविलाई सम्बोधन गरेर वर्नमानमा देश एक प्रकारले जेलजस्तै भएको हालचाल सुनाएका छन् । जुनसुकै विषयमा कविता लेख्न सम्भव छ र कविता लेखनका लागि सामग्रीको अभाव छैन भन्दै कविले आफू सधैँ कविताको नशामा डुबिरहने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । शब्दसँग खेल्दाको अनुभूति नै बेग्लै हुन्छ भन्दै कविले शब्दलाई आफ्नो आराध्य देवता स्वीकारेका छन् । कविले एकातिर स्वान्त सुखाय, भावरहित, गुदीविहीन, अपरिवर्तनशील, पानीआन्द्रे र प्राणै नभएका बुख्याँचा कविता लेख्न आफू प्रवृत्त नहुने दृढता व्यक्त गरेका छन् भने अर्कातिर आफ्ना र सहिदका सपनाहरु, सीमाको दुखाइ, दलित र सीमान्तीकृत जनसमुदायको आवाजलाई लिएर आपूmले कविता लेख्न रूचाएको धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । मन दुःखी र खेत बाँझो भएपछि कविता नलेखूँ कि भन्ने आशङ्का व्यक्त गरे पनि उनले आफ्नो मन दुःखी भएको र देशरुपी खेत बाँझै रहेको देखेर नै बढ्ता कविताहरु लेखेका छन् । कविको स्पर्श पाएपछि सबै सृष्टि समृद्ध बन्न सक्छ, किनभने ब्रह्माण्डमा भएका यावत् कर्महरु कविकै कर्म हुन् भन्ने कुरामा उनी विश्वस्त छन् । उनले पूmल र कविताको सौन्दर्य एउटै हो भन्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन् । आफ्नी हजुरआमा, आमा, बा र श्रीमतीले जस्तै कर्मशील र व्यावहारिक कविता आफूले लेख्न सक्छु कि सक्तिनँ होला भनेर उनले आफ्नै कविताको आलोचना गर्ने सन्दर्भमा बिम्ब, प्रतीक आदिमात्र होइन, जुन कवितामा बढ्ता नारा र अभिव्यक्तिको ढङ्ग नै छैन, त्यस्तो कवितालाई ‘इस् तेरो कविता’ भनेर व्यङ्ग्य पनि गरेका छन् ।
कवि खनाल रेवतीरमणले यस सङ्ग्रहका केही कवितामा वैयक्तिक विचार र आत्मानुभूतिहरु पनि पस्किएका छन् । फूलको गुण देखेर उनले आफूभित्र फूल बन्ने र पुनर्जन्मप्राप्तिको चाहना सँगालेका छन् । उनले आफूलाई कर्ममा विश्वास राख्ने मान्छेका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आफू सदैव विचारको लडाइँ लड्दै आएको, अभावमा विचार खाने र पिउने गरेको एवं आफू मरेपछि कुनै वाद वा पार्टीको झन्डा होइन, राष्ट्रिय झन्डा ओढाइदिन र गरूडपुराण होइन मानवपुराण लगाइदिन आग्रह गरेका छन् । धेरैलाई परदेशको माटोमा रस भए पनि आफूलाई स्वदेशकै माटामा रस पसिरहेको भन्दै आफ्ना कवितामा राष्ट्रवादी स्वर सुसेलेका छन् । मान्छे भएर पनि कोइली, चखेवा, ढुङ्गो, माटो, मौरी, कमिला, डाँफे, हिमाल, बाँस, बकुल्ला, पहाड, नदी, फूल, अङ्गुर र मैनबत्तीजत्तिको सार्थक र परोपकारीका रुपमा पनि बाँच्न नसकेकामा उनले आफ्नै जिन्दगीलाई ‘थुक्क जिन्दगी’ भनेर धिक्कारेका छन् । सिसा र तलाउमा होइन, आफ्नो सक्कली अनुहार हेर्न त अर्काको आँखाको ऐना चाहिन्छ भन्दै उनले आपूm त्यही ऐनामा हेरिन मन पराएका छन् । दुःखभन्दा जीवनमा अर्को कुनै घनिष्ट साथी उनले देखेकै छैनन् । उनले आजसम्म खनिएका अनन्त बाटाहरुले मान्छेलाई गन्तव्यहीन नै बनाएकाले अब अर्काले खनेका पुराना बाटामा होइन, आफैँले खनेको नयाँ बाटामा आपूmलाई अग्रसर गराउन चाहेका छन् ।
जताततै महिला अधिकारका बारेमा मात्र कुरा उठ्छ, तर पुरूष अधिकारका बारेमा कतै आवाज उठाइएको पाइँदैन । यस सङ्ग्रहको एउटा ‘प्रिया, अब भने म तिमीलाई मन पर्छु’ कविता भने पत्नीपीडित पुरूषको अधिकारका बारेमा केन्द्रित छ । सधैँ श्रीमतीको कचकच सुन्दासुन्दै हैरान भएका लोग्नेले अब श्रीमतीलाई ढिकीजाँतो, चुलोचौकामा मात्र सघाउने होइन श्रीमतीले आफूलाई आङमा तेल घसिदिन, उठ् भने उठ्न र बस् भने बस्न राजी रहेको स्वीकारेर कविले अप्रत्यक्ष रुपमा पुरूषको अधिकारका बारेमा आवाज उठाएका छन् । त्यसैगरी, अर्को एउटा कवितामा उनले हरियो रङलाई जीवनको रङ स्वीकार्दै रुख रोपेर वातावरण जोगाउन आह्वान् गरेका छन् । ‘पशुहरु’ शीर्षकका बीस ओटा उपकविताहरुमा तुलनात्मक रुपमा मान्छेका आचरणभन्दा हरेक दृष्टिले पशुहरुका आचरण उपयुक्त र अनुकरणीय रहेको गम्भीर चिन्तन प्रस्तुत गरिएको छ । धर्तीलाई नारी र आकाशलाई पुरूषका रुपमा उभ्याएर तिनीहरुका बीचमा प्रेम र यौनसन्तुष्टिको चर्चा पनि गरिएको छ ।
यस कवितासङ्ग्रहमा गद्यमात्र होइन, विशेषतः अनुष्टुप् छन्दका पद्य कविताहरु पनि सङ्गृहीत छन् । संस्कृतका सूक्ति र नेपाली उखानहरु पनि अधिकांश कवितामा प्रयोग गरिएको छ । नेपाली लोकजीवनमा भिजेका नयाँ–नयाँ शब्दहरुको प्रयोगमा पनि कविले बढ्ता अभिरूचि देखाएका छन् । अनुष्टुप् छन्दमा संरचित उनका कविताका कतिपय पङ्क्तिहरु सूक्तिजस्तै लाग्दछन्, जस्तै ः
मृत्युञ्जयी त्यही हुन्छ
गर्छ जो कर्मपूजन ।
दुखाइ ठेसको जान्न
ठेस नै लाग्नु पर्दछ
सुतेर चाल पाइन्न
होशमा जाग्नु पर्दछ ।
पाएमा कविको दृष्टि
ढुङ्गो पनि रसाउँछ
कविकै स्पर्शले साँच्चै
माटो पनि बसाउँछ ।
पोथ्रो बुटो खडा हुन्छ
फलेको बोट झुक्दछ
अदृश्य रविको ठाउँ
कविको दृष्टि पुग्दछ ।
यस कवितासङ्ग्रहको यथोचित भाषिक सम्पादन हुन नसक्ता भाषिक कसरहरु पनि प्रशस्तै रहेका देखिन्छन् ः सहबास (पृ. २), स्वस्ती (पृ. ४), अक्षेरास्त्र (पृ. ४), नक्षेत्र (पृ. ३४, ९३), सत्व (पृ. ३५), षट्रस (पृ. ३७), ध्वंश (पृ. ३७), भञ्ज्याङ (पृ. ३७), पूरातन (पृ. ३९), वाग (पृ. ४२), श्वान्त (पृ. ५०), मुढता (पृ. ५०), नृसंस (पृ. ५१), उचाभिलाषी (पृ. ५३), जठराग्नी (पृ. ५३), धुन्दुकारी (पृ. ५४, ८८), निरस (पृ. ५५), मध्यबिन्दु (पृ. ६९), अबनी (पृ. ७०), उतप्त (पृ. ७०), सम्यक (पृ. ७१), प्रदुषण (पृ. ७१), बसिभूत (पृ. ७३), घनिभूत (पृ. ७९), उभिण्डिएर (पृ. ८४), भ्रुण (पृ. ८८), दीर्घ सूत्री (पृ. ९३), विखण्डन् (पृ. ९४), जनादेश् (पृ. ९७), रत्ति (पृ. १०१), वागिश्वरी (पृ. १०२), लर्दछौ (पृ. १०५), मृगमरिचिका (पृ. ११०), मेघाछन्न (पृ. १११), बर्जित (पृ. ११६), झण्डै (पृ. ११६), संस्कृती (पृ. ११९), जीवात् (पृ. ११९), परिस्कार (पृ. १३५), औचित्यता (पृ. १४३), उत्सुक्य (पृ. १४४), जनहीत (पृ. १४४) आदि ।
त्यसैगरी, संस्कृतका कतिपय सूक्ति र उद्धरणहरुमा पनि प्रशस्तै विचलन आएको पाइन्छ । ‘तिम्रै अनुचर अनुयायी बन्न’ (पृ. ३) यहाँ अनुचर र अनुयायी दुवैको अर्थ एउटै हो भन्ने कुराको पनि उपेक्षा गरिएको छ । ‘मानुषी राज्यसत्ता’ (पृ. ३८) यहाँ नारीको राज्यसत्ता होइन, मानवीय राज्यसत्ता भन्न खोजिएको हुनुपर्छ । ‘भाँचकुच’ (पृ. ४५) का ठाउँमा ‘भाँचभुँच’ शब्दको प्रयोग गरिनु पर्दथ्यो । ‘घटाउ जोड चलेको छ’ (पृ. ४८) लाई ‘जोड घटाउ’ गर्न सकिन्थ्यो । ‘हद से हद’ ((पृ. ५६) मा ‘से’ घुसेको कुरा धेरै पाठकलाई अस्वाभाविक लाग्न सक्छ । ‘दिव्यधरा रत्नगर्भा हिमाल’ (पृ. ५७) मा ‘हिमाल’ स्त्रीलिङ्गी शब्द नभएकाले त्यसका विशेषणलाई स्त्रीलिङ्गमा प्रयोग गरिनु आवश्यक थिएन । ‘सबैजन’ (पृ. ९३) लाई पदवियोग गरिनु पर्दथ्यो । ‘निम्ठो दिई जुरी’ लिनेमा ‘जुरी’का ठाउँमा ‘झुसी’ शब्द प्रयोग गरिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । ‘बटोलेर’ (पृ. १०१) लाई छन्दको अनुरोधमा ‘बटूलेर’ गराउन सकिन्थ्यो । यसका साथै, कतिपय एउटै विषयवस्तु धेरै कवितामा पुनरूक्त भइरहँदा खल्लो लागेको अनुभूति पनि केही पाठकलाई हुनु अस्वाभाविक होइन । यी र यस्तै सामान्य कसरहरु विद्यमान रहे पनि वर्तमान साहित्यिक परिवेशका दृष्टिले यो कृति तुलनात्मक रुपमा नौलो, स्तरीय र सङ्ग्रहणीय पनि रहेको देखिन्छ ।
(सहप्राध्यापक, नेसंवि, कालिका विद्यापीठ, गैँडाकोट, नवलपरासी)
पराई भूमिबाट मेरी प्रिय सखीका नाममा एउटा चिठी
खाद्यान्नको उत्पादनमा फरवार्ड सक्रिय
‘उत्खनन’को आलोकमा घनश्याम पौड्यालको मूल्याङ्कन
शिक्षा (लघु कथा)
दोस्रो ‘झमककुमारी’ नानी बिवु !
ओइलिएको पुष्पकमल र निस्तेज प्रचण्ड
अयोध्या, ओली र अयोध्यापुरी